Ciyaaraha & Sheekooyinka Madadaalada iyo Sheekooyinka waxaa iska leh Alietc.com - Alietc.com
Bandhigyo Ganacsi Sare ee Ciyaaraha iyo Madaddaalada
Hong Kong Toys & Games fair kow iyo toban - afar iyo toban Janaayo 2021 Magaalada Shirka iyo Carwada, Hong Kong Carwada & Ciyaaraha HKTDC ee magaalada ma aha oo kaliya dhacdada calanka ee nooceeda ah Aasiya; Si kastaba ha noqotee, intaa waxaa sii dheer, waa dhacdadii ugu horreysay ee ganacsiga sanadka, taasoo siinaysa faa'iidada ugu horreysa ee dhaqaajiyeyaasha macaamiisha caalamiga ah ee soosaaridaRead More
Qalabka Muusikada lagu talinayo ee bilowga ah
Waa maxay qalab muusig? Qalabka muusiggu waa aalad loo abuuray ama la hagaajiyay si loogu sameeyo dhawaaqyada muusikada. Guud ahaan, wax kasta oo soo saara muusig waxaa loo qaadan karaa aalad muusig. Taariikh kooban oo ah aaladaha muusikada: Muusikada waxaa lagu garaacay tan iyo bilowgii waqtiga aadanaha iyadoo la adeegsanayo aaladaha iyadoo loo marayo heesaha codka. Inta badan qadiimiga taariikhyahanadu waxay tilmaamayaan […]Read More
Bandhigyo ganacsi oo sarreeya oo isboorti iyo madadaalo ah
"Waxaan u maleynayaa isboorti xirfadeed, kubbadda cagta, in aan tusaale u soo qaato, waa aasaas ahaan qaab madadaalo ah.", Gregg Easterbrook Hong Kong Toys & Games fair 11-14 January 2021 magaalada Convention and Exhibition Center, Hong Kong The HKTDC city Toys & Ciyaaraha Carwada ma aha oo kaliya dhacdada calanka ee nooceeda ah Aasiya; si kastaba ha ahaatee, intaa waxaa sii dheer, […]Read More
Jardiinooyinka Madadaalada ee Taageerayaasha Dunida oo dhan
Baarkinka Madadaalada: Baarkinka madadaalada waa baarkinka oo leh waxyaabo badan oo duufsasho ah, sida raacid iyo ciyaaro. Waxay sidoo kale soo bandhigeysaa soojiidasho kale oo ujeeddooyin madadaalo leh. Beerta dulucdu waa nooc ka mid ah baarkinka madadaalada oo saldhig u ah dhismayaasha iyo soojiidashada hareeraha mawduuca dhexe, badiyaa waxaa lagu soo bandhigayaa aagag kala duwan oo leh fikrado kala duwan. Muxuu ahaa kii ugu horeeyay […]Read More
Halkee laga Heli karaa Bixiyeyaasha Qalabka Ciyaaraha ee Fiidiyoowga ah
Haddii aad tahay qof xiiseeya ciyaarta fiidiyowga oo aad rabto inaad hesho alaab-qeybiyeyaasha ugu fiican ee qalabka ciyaarta fiidiyowga, waxaad ku kalsoonaan kartaa ilaha internetka si aad u daryeesho tan. In kasta oo bogaggan ay badanaa la xiriiraan cayaaraha, haddana waxay kaloo leeyihiin qalabyo kala duwan oo si fudud u soo dhaca marka ay tahay ganacsigaaga. […]Read More
Bixiyeyaasha Amniga Ciyaaraha
Ma ogtahay in nabadgelyadu ay tahay hal qodob oo weyn marka aad dooranaysid waxyaabaha isboortiga? Miyaad weligaa u malaynaysaa in alaabadaada gudaha iyo dibaddaba aysan sugnayn nabadgelyo ay ku ciyaari karaan? Ma jiraan alaab-qeybiyeyaal la isku halleyn karo oo halkaa jooga oo bixiya qalab isboorti oo tayo sare leh? Waxay noqon kartaa geedi socod dhib badan iyo waqti qaadasho in la isbarbar dhigo iyo […]Read More
Sida loo Taageero Waxqabadka Ciyaaraha Kooxda
Isboortiga kooxda, si kasta oo ay u adag yihiin, waxay noqon karaan wax aad loogu riyaaqo haddii ciyaartoydu ku raaxaystaan ​​tartanka oo ay ka wada shaqeeyaan hal ujeedo. Tani waxay suurtagal noqon kartaa oo keliya haddii qof walba uu ku soo bandhigo sida ugu fiican isaga / iyada ugu wanaagsan. Isboorti wanaagsan iyo wada shaqeyn kooxeed waa inay ahaadaan hadafka ugu weyn ee kaqeybgalayaasha oo dhan. Isboorti wanaagsan ee isboorti kooxeed waa […]Read More
Faa'iidooyinka La Shaqeynta Qalabka Jirdhiska
Waxaa jira arrimo badan oo saameyn ku yeelan kara tayada jimicsiga, mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsanna waa tayada qalabka jimicsiga. Qalabka ugu fiican jimicsiga, waa lagama maarmaan in laga dukaameysto oo la isbarbar dhigo qiimaha ka hor intaadan go'aan kama dambeys ah gaarin. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu horeeya ee ay tahay inaad […]Read More